Andriamanitra ao amin' ny kristianisma - Wikipedia
Andriamanitra ao amin' ny kristianisma
Andriamanitra, araka ny finoana kristiana, dia ilay Andriamanitra tokana resahina aoamin' ny Baiboly. Nandova ny fiveheverana sasany ao amin' ny jodaisma ny kristianisma noho izy nampiasa ny boky masin' ny jodaisma, dia ny Testamenta Taloha ao amin' ny Baiboly. Nisy fiovany izany fiheverana izany taorian' ny niainan' i Jesoa Kristy teto an-tany izay ataon' ny Kristiana fa zanak' Andriamanitra tonga nofo sady ilay Mesia resahin' ireo mpaminany sady nadrasana hatramin' izay. Niteraka fikorontanan' ny finoana an' Andriamanitra tokana, araka ny ampianarin' ny jodaisma, izany fivoasana vaovao ny Soratra Masina izany, izay tsy ny Testamenta Taloha ihany fa ny Testamenta Vaovao koa sy ny boky sasany atao hoe apôkrifa na pseodepigrafa.
Tsy ny fiangonana kristiana rehetra no manaiky an' izany fiheverana an' i Jesoa sy ny Fanahy Masina ho Andriamanitra izany. Tsy mifanaraka amin' ny mônôteisma ny fampianarana ny Trinite hoy ny antokom-pivavahana kristiana sasany isan' ireo niforona taorian' ny Reformasiona (na Refôrma). Maro ireo fiangonana manohitra ny Trinite ka mihevitra an' i Jesoa ho Mesia fotsiny fa tsy Andriamanitra, ary ny Fanahy Masina ho hery entin' Andriamanitra miasa. Manohana ny atao hoe onitarisma izy ireo, izany hoe tsy persôna telo Andriamanitra fa tokana. Maro ireo fivavahana kristiana niforona taty aoriana izay manohitra ny Trinite, ka isan' ireny ny Vavolombelon’i Jehovah.
Andriamanitra ao amin' ny jodaisma
Andriamanitra ao amin' ny bahaisma
Andriamanitra ao amin' ny sikisma
Andriamanitra ao amin' ny môrmônisma
Andriamanitra ao amin' ny hindoisma
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Andriamanitra_ao_amin%27_ny_kristianisma&oldid=1038126"
Voaova farany tamin'ny 26 Septambra 2021 amin'ny 14:40 ity pejy ity.